Wholesale Vaping Mitero muUnited States uye Pasi Pasi fekitori uye vagadziri | SMOORE
Sezvo vaping ichikura mukuzivikanwa, inova tarisiro yechisikigo kune hurumende dzinoda mutero wemari. Nekuti zvigadzirwa zvemhepo zvinowanzo tengwa nevaputi uye vaimbove vaputi, vakuru vemitero vanofungidzira nenzira kwayo kuti mari inoshandiswa pa e-fodya imari isiri kushandiswa pazvigadzirwa zvefodya zvechivanhu. Hurumende dzakatsamira pamidzanga uye zvimwe zvigadzirwa zvefodya sechinhu chinowana mari kwemakumi emakore.
Kunyangwe vaping zvishandiso uye e-mvura vanokodzera kubvisiswa mutero sefodya kunenge kuri padhuze nepfungwa. Hurumende dzinovaona vachisundidzira vaputi kure nefodya, uye ivo vanonzwisisa kuti mari yakarasika inofanira kuitwa. Sezvo kufema kuchitaridzika sekuputa, uye paine hutano hweveruzhinji kupokana nekupisa, inova chinangwa chinokwezva kune vezvematongerwo enyika, kunyanya nekuti vanogona kururamisa mutero nemhando dzakasiyana dzezvibodzwa zvehutano.
Mitero yeVape ikozvino iri kukurudzirwa uye inopfuudzwa nguva zhinji muUnited States nekumwewo. Mitero inowanzopikiswa nevatsigiri vekudzora fodya kukuvadza uye vamiririri vekupemha indasitiri mapoka emabhizimusi uye vanopisa vatengi, uye ivo vanowanzo kutsigirwa nemasangano ekudzivirira fodya senge yemapapu nesangano remwoyo.
Nei hurumende dzichibhadhara mutero zvigadzirwa?
Mitero yezvinhu zvakatarwa - zvinowanzodaidzwa kuti mitero yemitero - inoiswa pazvikonzero zvakasiyana siyana: kuunganidza mari yevanobhadhara mutero, kushandura hunhu hwevaya vari kubvisirwa mutero, uye kugadzirisa mutengo wezvakatipoteredza, zvekurapa, nezvivakwa zvinogadzirwa nekushandiswa kwezvigadzirwa. Mienzaniso inosanganisira kubhadharisa doro kunwisa kunwisa, uye kubhadhara peturu kubhadhara mari yekugadzirisa migwagwa.
Zvigadzirwa zvefodya zvagara zvichingove zvemitero yemitero. Nekuti kukuvara kwekusvuta kunoisa mutengo kunzanga yese (kurapwa kwevanoputa), vanotsigira mutero wefodya vanoti vatengi vefodya vanofanira kutsikisa bhiri. Dzimwe nguva mutero wekunwa doro kana fodya unonzi mutero wezvivi, nekuti iwo zvakare unoranga hunhu hwevanonwa uye vanoputa - uye mukufunga zvinobatsira kugutsa vatadzi kuti vasiye nzira dzavo dzakaipa.
Asi nekuda kwekuti hurumende inova inoenderana nemari, kana kusvuta kukaderera pane kushomeka kwemari kunofanirwa kuitwa neimwe sosi yemari, kana zvisina kudaro hurumende inofanira kudzora mashandisiro. Kune hurumende zhinji, mutero wefodya ndiyo yakakosha sosi yemari, uye mari yacho inobhadharwa kuwedzera kune mutero wekutengesa mutero unoongororwa pane zvese zvigadzirwa zvinotengeswa.
Kana chigadzirwa chitsva chikakwikwidza nemidzanga, vagadziri vemitemo vazhinji vanokurumidza kuda kubhadharisa chigadzirwa chitsva zvakaenzana kuti vagadzire mari yakarasika. Asi ko kana chigadzirwa chitsva (ngatichichidane e-fodya) chingaderedza kukuvara kunokonzerwa nekusvuta uye nemitengo yehutano yakabatana? Izvo zvinosiya vaparamende vari mukushomeka - zvirinani ivo vanonetseka nekuidzidza zvachose.
Kazhinji vatongi venyika vanobvaruka pakati pekutsigira mabhizinesi emuno senge zvitoro zvevape (vasingade mutero) uye vanofadza vanotsvaga mapoka emapoka anoremekedzwa seAmerican Cancer Society uye American Lung Association (iyo inogara ichitsigira mutero pane zvigadzirwa zvemhepo). Dzimwe nguva iyo yekufungidzira chinhu kusanzwisiswa nezve izvo zvinofungidzirwa kukuvadzwa kwemhepo. Asi dzimwe nguva ivo vanongoda chete iyo mari.
Vape mitero inoshanda sei? Ivo vakafanana kwese kwese here?
Vazhinji vatengi veUS vanobhadhara mutero wekutengesa wehurumende pane vaping zvigadzirwa zvavanotenga, saka nyika (uye dzimwe nguva dzemunharaunda) hurumende dzinotobatsirwa nekutengesa vape kunyangwe mitero yemitero isati yawedzerwa. Mitero yekutengesa inowanzo kuongororwa sepesenti yemutengo wekutengesa wezvigadzirwa zviri kutengwa. Mune dzimwe nyika zhinji, vatengi vanobhadhara "kukosha kwakawedzerwa mutero" (VAT) inoshanda nenzira imwecheteyo nemutero wekutengesa. Kana zviri zvemitero yemitero, vanouya mune akati wandei emhando dzakasiyana:
Mutero wekutengesa pa e-liquid - Izvi zvinogona kuongororwa chete pane nicotine-ine mvura (saka iri mutero weicotine), kana paese e-liquid. Sezvo inowanzo kuongororwa pamamirilita, iyi e-muto mutero inokanganisa vatengesi vee-liquid yemabhodhoro kupfuura zvazvinoita vatengesi vezvigadzirwa zvakapedzwa zvine hushoma e-mvura (kunge pod vapes uye cigalikes). Semuenzaniso, vatengi veJUUL vaizongobhadhara mutero pa0.7 mL yee-mvura kune imwe pod (kana kungoita 3 mL pakiti yemapodhi). Nekuti indasitiri yefodya inoburitsa zvigadzirwa zvese zvidiki pod-based zvishandiso kana fodya, vanochengeta fodya vanowanzo sundira mutero wemamirilita.
Mutero wepamusoro - Rudzi urwu rwe-e-fodya mutero unobhadharwa zvinofungidzirwa nemutengesi (muparidzi) kana mutengesi kuhurumende, asi mutengo unogaropfuudzwa kumutengi nenzira yemitengo yepamusoro. Iyi mhando yemutero inoongororwa pamutengo wechigadzirwa uyo mutengesi anobhadhariswa kana achitenga kubva kune mutengesi. Kazhinji nyika inoronga mafufu sechigadzirwa chefodya (kana "zvimwe zvigadzirwa zvefodya," izvo zvinosanganisira fodya isina utsi) nechinangwa chekuongorora mutero. Mutero wepamusoro unogona kuongororwa chete pane zvigadzirwa zvine nicotine, kana inogona kushanda kune ese e-mvura, kana zvigadzirwa zvese zvinosanganisira zvishandiso zvisina e-liquid. Enzaniso dzinosanganisira California nePennsylvania.California vape mutero mutero wakazara unogadzirirwa gore rega nehurumende uye yakaenzana neyakaunganidzwa mwero wemitero yese yefodya. Izvo zvinongoshanda chete kune zvigadzirwa zvine nicotine. Iyo Pennsylvania vape mutero pakutanga yakashandiswa kune zvese zvigadzirwa, kusanganisira zvishandiso uye kunyange zvishongedzo izvo zvisina kusanganisira e-liquid kana nicotine, asi dare rakatonga muna 2018 kuti nyika haikwanise kutora mutero pazvigadzirwa zvisina nicotine.
Dzimwe nguva mitero yemitero inoperekedzwa ne "mutero wepasi," uyo unobvumidza nyika kutora mitero pane zvese zvigadzirwa chitoro kana mutengesi anowanikwa pariri zuva rinotanga kushanda mutero. Kazhinji, mutengesi anoita zvinyorwa pazuva iro uye anonyora cheki kuhurumende kune huwandu hwakazara. Dai chitoro chePennsylvania chaive nemari inosvika zviuru makumi mashanu zvemadhora zvekutengesa zviripo pakuverenga, muridzi angadai akave nemhosva yekubhadharira madhora zviuru makumi maviri kuhurumende. Kune mabhizinesi madiki asina mari yakawanda paruoko, mutero wepasi pachawo unogona kutyisidzira hupenyu. Iyo PA vape mutero yakadzinga anopfuura zana vape zvitoro kunze kwebhizimusi mugore rayo rekutanga.
Kuvhima mitero muUnited States
Iko hakuna federal mutero pane vaping zvigadzirwa. Mabhiri akaunzwa muCongress kumitero yemhepo, asi hapana akaenda kuvhoti yeImba yakazara kana Seneti parizvino.
US State, ndima, uye emunharaunda mitero
Asati a2019, mapfumbamwe anoti uye Dunhu reColumbia vakateresa zvigadzirwa zvinopisa. Iyo nhamba yakapetwa kanopfuura kaviri mumwedzi minomwe yekutanga ya2019, apo kuvhunduka kwetsika pamusoro peJUUL nekuyaruka kwevachiri kuyaruka kwakange kwakabata misoro kanenge zuva rega rega kweanopfuura gore kwakasundidzira vaparamende kuti vaite chimwe chinhu "kumisa chirwere ichi."
Parizvino, hafu yeUS inoti ine imwe nyika yepasirese vaping chigadzirwa chemutero. Pamusoro pezvo, maguta nematunhu mune mamwe matunhu ane yavo vape mitero, sezvinoita Dunhu reColumbia nePuerto Rico.
Kunyange Alaska isina mutero wenyika, dzimwe nzvimbo dzemasipareta dzine yavo vape mitero:
Juneau Borough, NW Arctic Borough nePetersburg vane zvakafanana 45% mitero yakawanda pazvinhu zvine nicotine
Matanuska-Susitna Borough ine 55% mutero wakazara
Mutero weCalifornia pane "zvimwe zvigadzirwa zvefodya" unogadzwa gore rega nehurumende Board yeEqualization. Iyo inoratidzira iyo muzana yemitero yese yakaongororwa pamidzanga. Pakutanga izvi zvaisvika 27% yemutengo wepamusoro, asi mushure mePfungwa 56 yakawedzera mutero wefodya kubva pamadhora 0,87 kusvika kumadhora 2.87 pakiti, mutero wevape wakawedzera zvakanyanya. Kwegore rinotanga Chikunguru 1, 2020, mutero uri 56.93% yemutengo wepamusoro wezvose zvigadzirwa zvine nicotine
Nyika ine mutero une mativi maviri, ichiongorora madhora 0,40 pamamirilita pane e-liquid mune yakavharwa-sisitimu zvigadzirwa (pods, cartridges, cigalikes), uye 10% wholesale pane yakavhurika-system zvigadzirwa, kusanganisira emabhodhoro e-mvura nemidziyo
A $ 0.05 pamamilirita mutero pane chikakananda chine e-mvura
Guta guru renyika rinoisa marasha se “zvimwe zvigadzirwa zvefodya,” uye rinoongorora mutero pamutengo wekutengesa zvichibva pachiyero chakatarwa kumutengo wefodya. Kwegore razvino remari, rinopera munaGunyana 2020, mutero unoiswa pa91% yemutengo wepamusoro wezvigadzirwa uye nicotine ine e-mvura
Iyo $ 0.05 pamamililita emutero pa e-liquid mune yakavharwa-system zvigadzirwa (pods, cartridges, cigalikes), uye 7% mutero wekutengesa pane akavhurika-sisitimu michina uye emabhodhoro e-mvura ichatanga kushanda Jan. 1, 2021
Iyo 15% yekutengesa yakawanda pane zvese vaping zvigadzirwa. Pamusoro pemutero wepasirese, vese Cook County uye guta reChicago (riri muCook County) vane yavo vape mitero:
Chicago inoongorora $ 0.80 pamutero webhodhoro pane nicotine-ine mvura uye zvakare $ 0.55 pamamililita. (Chicago vapers vanofanira kubhadharawo iyo $ 0.20 pa mL Cook County mutero.) Nekuda kwemitero yakawandisa, mazhinji mavape zvitoro muChicago anotengesa zero-nicotine e-liquid uye mapfuti eiyo DIY nicotine kudzivirira iyo yakakwira pa-mL mutero pane yakakura mabhodhoro
Cook County mitero zvigadzirwa zvine nicotine pamutengo we $ 0.20 pamamililita
Iyo $ 0.05 pamamirilita mutero pane ese e-mvura, iine kana isina nicotine
Iyo 15% mutero wepasi rose pamabhodhoro e-mvura uye yakavhurika-system zvishandiso, uye $ 1.50 pamubhadharo weuniti pane akada pods uye makatekadhi
Iyo 43% mutero wekutengesa pazvinhu zvese zvinopisa
Iko hakuna statewide vape mutero muMadganis, asi dunhu rimwe rine mutero:
Montgomery County inopa 30% mutero wepamusoro pazvinhu zvese zvinopisa, kusanganisira zvishandiso zvinotengeswa zvisina mvura
Iyo 75% mutero wekutengesa pazvinhu zvese zvinopisa. Mutemo unoda kuti vatengi vaburitse humbowo hwekuti avo vaping zvigadzirwa zvakabhadhariswa mutero, kana ivo vari pasi pekubatwa uye faindi ye $ 5,000 pamhosva yekutanga, uye $ 25,000 pamamwe mhosva.
Muna 2011 Minnesota yakava nyika yekutanga kuisa mutero pae-fodya. Mutero pakutanga yaive 70% yemutengo wepamusoro, asi yakawedzerwa muna2013 kusvika pa95% yezvakawanda pane chero chigadzirwa chine nicotine. Cigalikes uye pod vapes - uye kunyange matangi ekutanga anosanganisira bhodhoro re e-liquid - anotorwa mutero pa95% yehuwandu hwayo hwese, asi muabhodhoro e-liquid chete iyo nicotine pachayo inobhadhariswa
Iyo 30% mutero wekutengesa pane zvese zvigadzirwa zvemhepo
Iyo 8% mutero wekutengesa pane yakavhurika-system vaping zvigadzirwa, uye $ 0.30 pamamirilita pane yakavharwa-system zvigadzirwa (pods, cartridges, cigalikes)
New Jersey mitero e-mvura pa $ 0.10 pamamirilita mune pod- uye macartridge-based zvigadzirwa, 10% yemutengo wekutengesa weemabhodhoro e-mvura, uye 30% wholesale yemidziyo. Vamiriri veNew Jersey vakavhota muna Ndira 2020 kuti vawedzere zvakapetwa mairi-tiered e-liquid mutero, asi mutemo mutsva wakapihwa vhoti nagavhuna Phil Murphy
New Mexico ine ma-tiered e-liquid maviri-maviri: 12.5% ​​yakawanda pamvura yakabhoderedzwa, uye $ 0.50 pane yega pod, katuriji, kana fodya ine hunyanzvi pasi pemamirilita mashanu.
Mutero we20% wekutengesa pane zvese zvigadzirwa zvemhepo
Iyi $ 0.10 pamamililita mutero pane nicotine-ine e-mvura
Pamwe mutero wevape unozivikanwa kwazvo munyika iPennsylania 40% mutero wekutengesa. Pakutanga yakaongororwa pane zvese zvigadzirwa zvemhepo, asi dare rakatonga muna2018 kuti mutero unongogona kushandiswa chete kune e-liquid nemidziyo inosanganisira e-liquid. Iyo PA yemhepo mutero yakavharira anopfuura zana zana emabhizimusi mudunhu mukati megore rekutanga mushure mekubvumidzwa
A $ 0.05 pamamililita emutero pa e-liquid uye $ 3.00 pamutero weyuniti pane e-fodya
A makumi mashanu muzana muzana mutero pa e-mvura uye zvigadzirwa zvakagadzirwa
Iyo 92% mutero wekutengesa pane e-liquid nemidziyo - mutero wepamusoro wakatemerwa nechero nyika
A $ 0.066 pamamilirita emutero pane nicotine-ine e-mvura
Nyika yakapasa e-liquid mutero wemitengo miviri muna 2019. Inobhadharisa vatengi madhora 0,27 pamamililita pane e-muto - iine kana isina nicotine - mumapoda uye macartridge madiki pane 5 mL saizi, uye $ 0.09 pamamirilita pane mvura iri mumidziyo. yakakura kudarika mashanu mL
Imwe $ 0.075 pamamililita mutero pane ese e-mvura, iine kana isina nicotine
Imwe $ 0.05 pamamilirita mutero pa e-liquid mune yakavharwa-system zvigadzirwa (pods, cartridges, cigalikes) chete-iine kana isina nicotine
Iyo 15% mutero wekutengesa pane zvese zvigadzirwa zvemhepo
Vape mitero kutenderera pasirese
Sezvo muUnited States, vatongi vepasirese pasirese havanyatsonzwisisa zvigadzirwa zvemhepo parizvino. Zvigadzirwa zvitsva zvinoita kunge vanogadzira mutemo sekutyisidzira mutero wefodya (izvo zvavari chaizvo), saka chishuwo kana kazhinji kuisa mitero yepamusoro uye tariro yezvakanakisa.
International vape mitero
Leke gumi ($ 0,091 US) pamamilirita mutero pane nicotine-ine e-mvura
Manats makumi maviri ($ 11.60 US) pamutero wemarita (inenge $ 0.01 pamamililita) pane ese e-mvura
Mutero uri 100% yemutero wepamberi mutero pane nicotine-ine e-mvura. Izvo zvinoenzana ne50% yemutengo wekutengesa. Chinangwa chemutero hachizivikanwe, nekuti mhepo dzinonzi dzakarambidzwa munyika
Kunyangwe hazvo Croatia iine e-liquid mutero pamabhuku, parizvino yakaiswa pa zero
A € 0.12 ($ 0.14 US) pamamilirita emitero pane ese e-mvura
Paramende yeDenmark yapasa DKK 2.00 ($ 0.30 US) pamamililita emitero, inozotanga muna 2022. Vaping nekukuvadza vatsigiri varikushanda kudzosera mutemo
MunaJune 2020, Estonia yakamisa mutero wayo pae-zvinwiwa kwemakore maviri. Nyika iyi yainge yambobhara € 0.20 ($ 0.23 US) pamamililita emutero paese e-liquid
A € 0.30 ($ 0.34 US) pamamilirita emutero pane ese e-mvura
A € 0.10 ($ 0.11 US) pamamilirita emitero pane ese e-mvura
HUF 20 ($ 0.07 US) pamamilirita mutero pane ese e-mvura
Mutero weIndonesia i57% yemutengo wekutengesa, uye unoratidzika kunge unongogadzirirwa nicotine-ine e-liquid ("zvakatorwa nezvakakosha zvefodya" ndiwo mazwi). Vakuru venyika vanoita kunge vanofarira kuti vagari varambe vachiputa
Mushure memakore ekuranga vatengi nemutero wakaita kuti vape zvakapetwa zvakapetwa zvakapetwa sekusvuta, paramende yeItaly yakabvuma mutero mutsva, wakaderera pa e-liquid mukupera kwa 2018. Mutero mutsva ndeye 80-90% yakaderera pane yekutanga. Mutero izvozvi unosvika ku € 0.08 ($ 0.09 US) pamamirilita eicicotine ine e-liquid, uye € 0.04 ($ 0.05 US) yezvigadzirwa zve zero-nicotine. Kune evhuya eItari anosarudza kugadzira yavo e-mvura, PG, VG, uye zvinonhuwira hazvibhadhariswe mutero
Midziyo uye nicotine-ine e-mvura inotorwa pamutero we200% yeCIF (mutengo, inishuwarenzi uye kutakura) kukosha
Kunyangwe Kazakhstan iine e-liquid mutero pamabhuku, parizvino yakaiswa zero
Mutero weKenya, uyo wakaitwa muna2015, unosvika zviuru zvitatu zvemadhora ekuKenya ($ 29.95 US) pazvigadzirwa, uye zviuru zviviri ($ 19.97 US) pama Refill. Mitero inoita kuti vape inodhura zvakanyanya kupfuura kuputa (mutero wefodya uri $ 0.50 pakiti) -uye pamwe ndiwo mutero wepamusoro-soro wepasirese
1 Kyrgyzstani Som ($ 0.014 US) pamamilirita mutero pane nicotine-ine e-mvura
Iyo isina kujairika mutero weLatvia unoshandisa mabheseni maviri kuverenga mutero pa e-liquid: kune € 0.01 ($ 0.01 US) pamamililita emutero, uye mutero wekuwedzera (€ 0.005 pamamiligiramu) pahuremu hweicikotine yakashandiswa
A € 0.90 ($ 1.02 US) pamamilirita emutero pane ese e-mvura
Iyo 0.2 yeMasedhonia Denar ($ 0.0036 US) pamamilirita emutero pa e-mvura. Iwo mutemo unobvumidza otomatiki kuwedzera mumutero mwero Chikunguru 1 wegore rega kubva 2020 kusvika 2023
A gumi ePhilippines pesos ($ 0.20 US) pamamirilita gumi (kana chidimbu chegumi mL) mutero pane nicotine-ine e-mvura (inosanganisira mune zvakagadzirwa zvigadzirwa). Mune mamwe mazwi, chero vhoriyamu inodarika gumi mL asi pasi pe20 mL (semuenzaniso, 11 mL kana 19 mL) inobhadhariswa pachiyero che20 mL, zvichingodaro
Iyo 0.50 PLN ($ 0.13 US) pamamililita emutero pane ese e-mvura
A € 0.30 ($ 0.34 US) pamamilirita emutero pane nicotine-ine e-mvura
A 0.52 Romania Leu ($ 0.12 US) pamamililita emutero pane nicotine ine e-mvura. Pane nzira yekuti mutero unogona kugadziridzwa gore rega zvichienderana nekutenga kwemutengi
Zvigadzirwa zvinoraswa (senge fodya) zvinobhadharwa pamutero pa50 rubles ($ 0.81 US) pachikamu. Nicotine-iine e-mvura inotorwa pamadhora gumi nematatu emadhora 0,21 US) pamamirilita
Mutero uri 100% yemutero wepamberi mutero pa e-mvura nemidziyo. Izvo zvinoenzana ne50% yemutengo wekutengesa.
Iyo 4.32 Serbian Dinar ($ 0.41 US) pamamilirita emutero pane ese e-mvura
A € 0.18 ($ 0.20 US) pamamilirita mutero pane nicotine-ine e-mvura
Nyika yekutanga kumisikidza mutero wevape wenyika yaive Republic of Korea (ROK, inowanzozonzi South Korea kuMadokero) - muna2011, gore rimwe chete iri Minnesota yakatanga kubhadharisa e-liquid. Parizvino nyika ine mitero ina yakaparadzana pae-liquid, imwe neimwe yakatarwa nechinangwa chekushandisa (National Health Promotion Fund ndeimwe). (Izvi zvakafanana neUnited States, uko mutero wemubatanidzwa wefodya wakatemerwa kubhadhara iyo Yevana Hutano Inishuwarenzi Chirongwa). Iwo akasiyana maSouth Korea e-emitero emitero inowedzera inosvika pakukwira 1,799 yakahwina ($ 1.60 US) pamamirilita, uyezve kune mutero wemarara pamakaturi anoraswa uye pods ye24.2 yakahwina ($ 0.02 US) pamakumi maviri emakoridhi
A 2 krona pamamililita ($ 0,22 US) mutero pane chikakananda chine e-mvura
Nyika dzakabatana Emirates (UAE)
Midzanga Yekupisa, Epen, Kusvuta Imwe nzira, Newport E Midzanga, E Midzanga Blister Pack, E Liquid Vapor Midzanga,